Dhulka ma Guuro | allsanaag
Dhulka ma Guuro
Faysal Cali Waraabe oo inta badan Soomaalidu ay u aragto nin aan maskax ahaan fadhiyin ayaa sheegay in gobolka Sanaag uu yahay dhul Soomaaliland, dhulkana uusan guurin ayna yihiin magaalooyinka sida Dhahar, Badhan iyo Laasqoray dhul Soomaaliland, dadku ay guuraan, balse dhulka uu welligiis ahaanayo dhul Soomaaliland.
Wuxuu intaa ku daray in Majeerteen uusan dhulkaa qaadi karin, xudduudna aysan u sammeeyn karin. Waxa uu ku faanay in dawlad dhan ay burburiyeen, ayna qabsan karaan Garoowe iyo Qardho.
Hadaba, waxaa dhab ah in hadalka uu shubay Faysal Waraabe iyo kuwo la midka ah aysan macna weeyn sammeeneeyn, Soomaaliland wax la yiraahdana ay raacday Ingiriiska, Soomaaliyana maanta ay tahay hal dal ama ha noqoto Hargeeysa, Baydhabo Kismaayo, Dhuusamareeb, iyo Boosaaso dalkaas oo ah mid aan la kalla jari karin, cidda aan Soomaalinimada ku qanacsaneen iyaga ayeey tahay ineey dhulka ka guuraan.
← Soomaaliya iyo Midowga Yurub oo kala saxiixday Mashruuc ku baxaya 42 Milyan oo Euro Baahiyaha Af-urur “waa in looga jawaabaa 24 saac →